China High-Quality Automatic H Type Broiler Cage စက်ရုံနှင့် ရောင်းချသူများ | မိုင်းတုံ
1. ခြေဖဝါးဒဏ်ရာနှင့် ကြက်များ ကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အကွက်သည် ချောမွေ့သည်။ partition net နှင့် bottom net ၏ encryption သည် laying hen fatigue syndrome ကို ထိထိရောက်ရောက် ဟန့်တားနိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို 6-7 ဆ တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ကန့်ကို သွပ်ရည်စိမ်ထားသည်။
2. သိပ်သည်းဆ မြင့်မားသော မွေးမြူခြင်းသည် မြေကို ကယ်တင်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် မွေးမြူခြင်းထက် မြေယာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် သက်သာသည်။
3. ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုသည် စွမ်းအင်နှင့် အရင်းအမြစ်များကို သက်သာစေပြီး ကြက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချပေးကာ ထူးခြားသော လှောင်အိမ်တံခါး ဒီဇိုင်းသည် ကြက်များကို ခေါင်းယမ်းကာ အစာစားသည့်အခါ အစာဖြုန်းတီးခြင်းမှ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
4. နေရာအရွယ်အစားအလိုက် သင့်လျော်စွာ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အလိုအလျောက် သောက်ရေစနစ်ကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။
5. ကြက်လှောင်အိမ်သည် စုဝေးရလွယ်ကူသည်၊ ကျွေးရန်အဆင်ပြေသည်၊ စီမံရလွယ်ကူသည်၊ နေရာချွေတာသည်၊ ကူးစက်ရောဂါများကို ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ရန်နှင့် ကြက်ရှင်သန်မှုကို တိုးပွားစေသည်။ လုပ်သားစရိတ်လျှော့ချခြင်း၊ အစာကျွေးခြင်း၊ အစာကျွေးခြင်း၊ သောက်သုံးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများကို လျှော့ချခြင်း လုပ်သားအင်အား လျှော့ချခြင်း၊ လုပ်သားစရိတ်များ သက်သာလာပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။
6. အသားစားမွေးမြူရေး အောက်ခြေပိုက်ကွန်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပစ္စည်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ခိုင်မာသော၊ ပျော့ပျောင်းပြီး တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိသော အောက်ခြေပိုက်ကွန်သည် ကြက်ရင်သားသွေးဥခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး coccidia နှင့် အခြားရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သေဆုံးမှုနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။
7. တူညီသောစကေးအောက်ရှိ အလိုအလျောက်မွေးမြူသည့်ကိရိယာကိုအသုံးပြု၍ ဧရိယာသေးငယ်သည်၊ မွေးမြူထုထည်ပိုမိုကြီးမားလာပြီး ကြက်အိမ်ကိုဆေးကြောရန်နှင့် ပိုးသတ်ရန်အဆင်ပြေသည်။
1.Hot galvanizing၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုမှု။
2. အဖြူရောင် PVC အစာကျွေးခြင်းကျင်း၊ ဖိအားခံနိုင်ရည်၊ အပူဒဏ်ကို အားကောင်းစေခြင်း။
3.Hot-dip galvanizing, ခိုင်ခံ့သောချေးခုခံ။
4.အတွင်းပိုင်းရှိ သံမဏိဘောလုံးပါရှိသော နို့သီးခေါင်းကောင်း သောက်သူ။
1. အသုံးများသော ပစ္စည်းလှောင်အိမ်သည် သံချေးတက်ရန် လွယ်ကူသည်၊ ကြာရှည်မခံပါ။
2. အနက်ရောင် PVC feed ကျင်းကို အားဖြည့်ခြင်း၊ စျေးပေါသော်လည်း ကွဲရလွယ်ကူခြင်း။
3. ညံ့ဖျင်းသောပစ္စည်းများ၊ ခိုင်ခံ့ခြင်းမရှိ၊ ကြေမွလွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု၊ အသက်သာဆုံးစျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး အာမခံချက်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခင်- 8 နှစ် တင်ပို့သူ စီးပွားဖြစ် ကြက်လှောင်အိမ် - အမျိုးအစား အလွှာတစ်ခု ကြက်လှောင်အိမ် - Motong